- AmaBakala: 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% boron ngokobunzima obufumanekayo, kokukhona umxholo we-boron ungcono kokusebenza kokukhuselwa yimitha.
1) -Ukubeka endaweni kukhokelela kusetyenziso lokhuselo lwenyukliya.
2) -Kulula ukuphatha kwaye uzenzele kwiintlobo ngeentlobo zeemilo kunye namalungu.
3) -Ukuzinza okungaphezulu kobubanzi kuluhlu olubanzi lobushushu.
4) -Umxholo ophezulu we-hydrogen kunye ne-boron eyongeziweyo.
5) -Ubunzima obulula kunye neendleko eziphantsi kunelothe.
Ishidi lethu le-polyethylene elikhuhliweyo liza kwiindidi ezahlukeneyo, ubukhulu, iziqwenga ezisikiweyo, iibhloko, amabakala kunye nemibala. Ngaba iphepha le-UHMWPE lisikiwe kwaye lenziwe ngomatshini kwiindawo ezingamampunge zesicelo sakho.
Iphepha le-polyethylene e-bormwpe
Ubungakanani ukusikwa kwesiko okanye ukusika kubungakanani; ubude be-7.3m, ububanzi obukhulu be-2m, ubukhulu ukuya kuthi ga kwi-250mm Cebisa: 6000mm x 1500mm; 3100mm x 1250mm; 4000mm x 2000mm; 3050mm x 1220mm, 4000mm x 1500mm, 2440 x 1220mm.
Umxholo weBoron Iipesenti ezi-3-50%, iindawo ezinjenge-5%, 8%, 12%, 20%
Umbala Umnyama ngumgangatho
Ukuhanjiswa Iphepha le-UHMWPE eligciniweyo lihamba ngenqanawa kwiintsuku ezingama-2-5 zeshishini
Ukusetyenziswa l Izixhobo zenyukliyal Iinqanawa zemfazwe zenyukllUkusebenza kwabasebenzi kunye nezixhobo zokufumanisa imithwalo
Izibonelelo zonyango l
lIzityalo zamandla enyukliya
lNaphi na apho kufuneka khona ukukhusela i-nuclear okanye i-radiation
I-Q1: Ngaba ungumvelisi?
A1: Ewe, siye ekuboneleleni iimveliso zobungcali
I-Q2: Ngaba ikulungele ukwenziwa?
A2: Ewe, ngokwemizobo yakho eneenkcukacha osinike yona.
I-Q3: Uhlawula njani?
I-A3: Nge-Paypal, intlawulo ye-T / T, isiQinisekiso soRhwebo kunye nenye intlawulo. Malunga neenkcukacha zokuhlawula nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Enkosi!
Q4: Ngaba unikeze isampuli?
I-A4: Ewe, sinokukunika iisampulu zasimahla, kodwa iindleko zomoya ziya kuhlawulwa ngabathengi.
I-Q5: Zingaphi iintsuku eziya kugqitywa iisampulu? Kwaye malunga nemveliso yobuninzi?
I-A5: Ngokubanzi iisampulu ziya kuthunyelwa kwangoko ngumoya ocacileyo kwiintsuku ezingama-3-5 ukuba iimpahla zisesitokhwe. Ngokwesiqhelo ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 okanye ngokomyalelo wakho.
Egqithileyo CNC Iqhubekekisiwe Borated Polyethylene Izahlulo
Okulandelayo: Ukuxinana okuphezulu kwePolyethylene (HDPE) Amaphepha
Iphepha le-HDP eli-10% eliboshwe
Iphepha le-10% leBorocic Hdpe
I-10% yeBoron yongezwe kwi-Hdpe Sheet
I-10% yeBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
Iipesenti ezili-10 zeBoron ezigcwalisiweyo ze-Hdpe Sheet
Iphepha le-HDP eli-12% eliboshwe
Iphepha le-12% leBorocic Hdpe
I-12% yeBoron yongezwe kwi-Hdpe Sheet
I-12% yeBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
Iipesenti ezili-12 zeBoron ezigcwalisiweyo ze-Hdpe Sheet
Iphepha le-HDPE eli-20% elibetyiweyo
Iipesenti ezingama-20 zeBoron ezigcwalisiweyo ze-Hdpe Sheet
Iphepha le-Hdpe eli-4%
Iphepha le-4% leBorocic Hdpe
I-4% yeBoron yongezwe kwi-Hdpe Sheet
I-4% yeBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
Ipesenti ye-4% yeBoron egcwalisiweyo ye-Hdpe Sheet
Iphepha le-Hdpe eli-5%
Iphepha le-5% leBorocic Hdpe
I-5% yeBoron yongezwe kwi-Hdpe Sheet
I-5% yeBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
I-5% yeBoron egcwalisiweyo ye-HDpe Sheet
Iphepha le-HDPE eli-8% elibethelwe
Iphepha le-8% leBorocic Hdpe
I-8% yeBoron yongezwe kwi-Hdpe Sheet
I-8% yeBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
Iipesenti eziyi-8 zeBoron ezigcwalisiweyo ze-Hdpe Sheet
I-Boron Yongeze i-Hdpe Sheet
IBoron iqulethe iphepha le-Hdpe
Iboron Ezigcwalisiweyo Hdpe Sheet
Indlela yethutyana Mat